Wararka Maanta: Sabti, July 7 , 2012-Wasiirka Dastuurka Soomaaliya oo sheegay in dib u eegis lagu sameynayo Maqaamka ay yeelanayso Muqdisho
Duqa Muqdisho, Maxamuud Axmed Tarsan oo shalay ka hadlay arrintan caasimadda ku saabsan ayaa sheegay in dastuurka uusan qeexayn in Muqdisho ay tahay caasimadda dalka, wuxuuna codsaday in arrintaas lagu caddeeyo dastuurka.
"Maqaamka Muqdisho ay yeelanayso waxaa looga hadli doonaan si dastuuri ah, sharci gaar ah ayaana laga soo saarayaa, shakina lama gelin in Muqdisho ay tahay caasimadda Soomaaliya," ayuu yiri wasiirka oo oo wareysi siinayay VOA-da isagoo intaas ku daray in caalamka oo dhan aan caasimadda lagu qorin dastuurka.
Wasiirku wuxuu sheegay in laga fikirayo in Muqdisho ay noqto gobol gaar u taagan iyo in kale, isagoo sheegay in dadka arrintan ka hadlayay ay ahayd inay markii hore u fiirsadaan, isagoo carrabka ku adkeeyay inaanay jirin wax shaki Muqdisho la geliyay.
Mar la weydiiyay qodobbo kale oo ay ka mid yihiin xuduudaha dalka oo aan si cad loogu qeexin dastuurka cusub, wuxuuna sheegay in dastuurkii ay soo gudbiyeen guddiga madaxa-bannaan aanu si cad u qeexayn xuduudaha, balse dastuurka hadda loo gudbiyay odayaasha dhaqanka uu si wanaagsan u sugayo, isagoo xusay in gobollada ka maqan Soomaaliya lagu raadinayo si nabad iyo wadahadal ah.
Dhanka kale, wasiirka dastuurka wuxuu carrabka ku ballaariyay in golaha ansixinta dastuurka ay wax ka bedel ku sameyn karaan dastuurkan qabyo-qoraalka ah, balse aysan odayaasha laga doonayo inay soo xulaan golaha ansixinta dastuurka iyo soo xulidda xildhibaannada cusub ee baarlamaanka.
"Odayaashu waxay nagu leeyihiin talo, waayo waa dad doonaya in wax wanaagsan oo la isku raacsan yahay ay yimaadaan, balse ergada ay soo xuleen ayaa leh go'aanka wax ka bedelka dastuurka," ayuu wasiirku yiri.
Hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo bulshada inteeda kale ay weli dhaliilo ka qabaan qabyo-qoraalka dastuurka oo dhawaan loo gudbiyay odayaasha dhaqanka.